Guddiga Amniga Oo Sheegay In Si KMG ah Loo Xirayo Qeybo Ka Mid Ah Wadooyinka Muqdisho | Radio Muqdisho	Saturday, May 25th, 2013	Bogga Hore
Guddiga Amniga Oo Sheegay In Si KMG ah Loo Xirayo Qeybo Ka Mid Ah Wadooyinka Muqdisho
Published on July 8, 2012 by Canab · 4 Comments · 3,413 views
Guddiga amniga Qaranka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeya 10-ka bishaan ay si KMG- ah u xirmayaan waddooyin ka mid ah kuwa caasimadda oo ay ku jirto Wadada Makka Al Mukarama xilli la guda galayo shirar muhiim ah oo looga arrinsanayo ka gudubka marxaladda KMG ah.
Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho gudiga amniga ayaa waxaa goob joog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, taliyaha ciidanka XDS, agaasimaha hay’adda nabadsugida, Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil kale.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/samad Macalin Maxamuud oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in magaalada aanan lagu wadan Karin hub aan sharciyeysneen waxa uuna shirkadaha iyo NGO-yada ku wargeliyay in ay isa soo diwaan geliyaan.
Gudiga ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabi 10 bishan la xirayo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay ka mid tahay wadada Makka Al mukarama ayna geyn doonaan ciidamo.
Abdi says:	July 8, 2012 at 4:40 pm	Ilaahay nabad ha u keeno Magaalad Muqdihso, waa caasimahdii Dalka
Reply »	In jabril says:	July 8, 2012 at 5:15 pm	waa arin aad u wanaagsa in gudiga amniga ay aad u adkeeyaan amaanka magaaladda shaqada iyo baaritaanadda xaafaddha ay si joogta ah uwadaan
shacabka soomaaliyeed meelkasta ay joogaan aad ayeey uguriyaaqeen gudiga amaanka howlaha ay kawadaan magaaladda muqdishu .
Reply »	mustaf says:	July 8, 2012 at 5:23 pm	fikarad fiican guuleysta walaalayaal
Reply »	Zakariye Qaran says:	July 9, 2012 at 4:15 pm	Waan soo dhaweynayaa hawlaha amniga lagu xaqiijinayo waana u hambalyeenayaa madaxda Qaranka